यस कारण ईन्स्योरेन्स “आतंक” :: Press Chautari ::
नेपाली शब्दकोष अनुसार आतंकको भावार्थ :"अन्याय तथा अत्याचारको पीडा र त्रासबाट हुने अन्योल, अत्यास हो । "
के त्यो अपराध थियो त ? म नै हुँ ईन्स्योरेन्स अगाडि “आतंक” राख्ने ।
शैलेश श्रेष्ठ प्रस्तुत "सम्प्रेषण"को पछिल्लो सामुदायिक वहसको श्रृङ्खलामा “ईन्स्योरेन्स आतंक” शिर्षक राख्ने/थप्ने मै हुँ । यसमा कुन अपराध भयो ? कुन कानुन मिचियो ?
दण्ड र सजायको लागि म स्वयम् तपाई समक्ष हाजिर छु ।
आफ्नै अनुभव सुनाउन चाहे,
बितेको पाँच बर्षमा मेरो नाममा चार जना विमा अधिकारी (एजेन्ट) ले मेरो भविष्य निक्र्यौल गरे । धेरैले चाहि त्यहि भने–“तेरो चिनजान धेरै छ, ईन्स्योरेन्समा लाग्–राम्रो आम्दानी हुन्छ ।”
दुवै तर्क सत्य जस्तै लाग्यो ।
पहिलो सत्य : अमेरिकाको न्युयोर्क केन्द्रित सामुदायिक सञ्चारकर्ममा लागेको ७ बर्षको समयमा बिभिन्न समाज र व्यक्तिसँगको चिनजानी संख्या सामान्यभन्दा अलि धेरै नै बढेको छ ।
दोस्रो सत्य : पूर्ण व्यावसायिक नबनेको सामुदायिक सञ्चारकर्मबाट कति नै आम्दानी हुन्छ र ? सत्य हो हामीले पुर्ण पेशागत पत्रकारिता गरेकै छैनौं । सायद ईन्स्योरेन्सको आम्दानी राम्रै हुनु पर्छ ।
बिमा अधिकारीले मेरो बर्तमानको अध्याँरो आर्थिक पाटोमा “ईन्स्योरेन्स” आम्दानीको उज्यालो छरी दिए । तर अहँ, म उजेलिन सकिन ।
म ईन्स्योरेन्सले उजेलिन सकिन झन् पो उद्देलित भए । यसकारण कि मेरा नजिककाहरुले “तैंले त अरु कम्पनीका एजेण्ट र विज्ञहरु पनि चिनेको छस्, मैले तिरेको रकम सहि ठाउँमा गाको छ कि छैन यस्सो देखाई दे न” भने । यसो भन्नेहरु धेरै भए । जब मान्छेका मनहरुमा अन्योल र अत्यास छाएको देखे अनि मैले त्यहि लेखे “ईन्स्योरेन्स आतंक” ।
मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु कि आतंकको भावार्थ -"अन्याय तथा अत्याचारको पीडा र त्रासबाट हुने अन्योल, अत्यास हो भनेर ।"
मलाई पनि लेख्नु मन थियो नि “ईन्स्योरेन्स अवेयरनेस” । रहर होइन “ईन्स्योरेन्स आतंक” लेख्नु, न कि शिर्षक लयात्मकताको लागि मात्रै हो । सामान्यतयः “अवेयरनेस” सम्भावित घटना हुनु अघि र “आतंक” घटना घट्दै गर्दा वा घटिसकेपछि हुने गर्दछ । यसैपनि “अवेयरनेस”को कार्यक्रम थिएन त्यो “ईन्स्योरेन्स आतंक” । प्रतिक्षा गरौं “ईन्स्योरेन्स अवेयरनेस” को श्रृङ्खला र वहस कुनै दिन होला ।
नेपाली समुदायमा अमेरिकाको डिसी मेट्रो एरिया र अन्य राज्य हुँदै न्युयोर्क सम्म आईपुग्दा ईन्स्योरेन्सको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो । अझ यसको चर्चा बिभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका हुँदै ज्याक्सन हाईटस्, डाइभर्सीटी प्लाजा भएर तपाई हाम्रो घरसम्म पस्यो, तब मात्र हामीले खोज्न थाल्यौं हामीलाई बिमा अधिकारी (एजेन्ट)ले थमाई दिएको दर्जनौं पृष्ठका खाता पाताहरु । जहाँ हामीले बर्तमानको केहि आम्दानी भविष्यको नाउँमा जोहो गरेका छौं । हामीले विश्वासकै भरमा हस्ताक्षर गरेर टेबल, दराज वा कुनै सुरक्षित स्थानमा थन्काएका दर्जनौं पृष्ठको ति मोटा-मोटा फायलमाथि सन्देह गर्नु हाम्रो अधिकार हो । त्यो हाम्रो भविष्यलाई साँचेको बर्तमान हो ।
म त भन्छु, तपाई पनि पल्टाउनुस आफुले तिरेको रकमले तपाईको भविष्यमा के कस्तो फाईदा र सुविधा दिलाउँछ ? बुज्रुकहरुसँग सोध्नुस र खोज्नुस तपाईको ईन्स्योरेन्समा आफ्नो भविष्य सुरक्षित छ कि छैन ?
सम्प्रेषणमा “ईन्स्योरेन्स आतंक”
मार्च १३ तारिख शेर्पा किदुगमा आयोजित “ईन्स्योरेन्स आतंक” विषयक सामुदायिक बहस नै थियो । धेरैले “ईन्स्योरेन्स आतंक” हुनु पथ्र्यौं भनेर सुझाए । कतिले चाहि ईन्स्योरेन्सको बारेमा “ऐजुकेड” गर्न चाहे ।
“ईन्स्योरेन्स” लिई सकेकाहरुले आफ्नो पोलिसीमा सशंकित भएपछि आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भनेर जवाफदेहिता र सम्भावित दुर्घटनाबाट सचेतनाको लागि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । र ईन्स्योरेन्सको अध्याँरो र उज्यालो पक्ष केलाउने प्रमुख उद्देश्य राखिएको थियो ।
कुनै पनि रेडियो, टेलिभिजन वा कुनै प्रशारक/प्रकाशक संस्थाले निश्चित् उद्देश्य प्राप्तिको लागि यस प्रकारका कार्यक्रमहरु उत्पादन र प्रशारण गर्ने गर्दछ । सो उद्देश्यप्राप्तिको निम्ति कार्यक्रम प्रस्तोता वा प्रशारक/प्रकाशक संस्थाले आफ्नो अलग्गै कार्ययोजना र नीति बनाउँने गर्दछ । जो सहभागीको लागि खल्लो लाग्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । “ईन्स्योरेन्स आतंक” पनि कुनै खुल्ला मञ्चको आमसभा थिएन । कुनै प्रशारण संस्थाको कार्यक्रम छायांकन थियो त्यो । निश्चित् समयावधी भित्रमा सबै सहभागीले चित्त बुझाउँछन् भन्नु मुर्खता हुन जान्छ । त्यो दिन पनि त्यस्तै सहभागी सबैले चित्त बुझाएनन् ।
यसो भन्दै गर्दा शैलेश श्रेष्ठप्रति कुनै आग्रह छैन न त पुर्वाग्रह नै छ । आमसञ्चारको एक विद्यार्थी भएकै कारण यत्ति लेख्ने आँट गरेको हुँ । यसको पनि आफ्नै निश्चित् परिभाषा छ, नीति छ, नियम छ, कारण छ, इथिक्स छ, इलिमेन्टस् छ सप्पै सप्पै छ ।
कार्यक्रम् जुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि छायांकन गरियो सम्भवतः प्रस्तोता र प्रशारण संस्थाले त्यसको आधाआधी मात्रै प्राप्त गर्यो भन्ने मेरो नीजि अनुमान हो । विषयगत जटिलता र त्यसको सरलता पुर्वक सुरक्षित अवतरण गराउन नसक्नु कार्यक्रम प्रस्तोताको कमजोरी हो । यससँगै विषयगत विज्ञको सट्टामा मै जान्ने र मै सुन्ने बक्ताहरुको एकोहोरो भाषण सहभागीको लागि “पहिलो गाँसमै ढुंगा” सावित हुन पुग्यो । सबैले आफ्नो आफु मात्रै राम्रो अरु अल्लि कम राम्रो भने । कसैले कसैलाई नराम्रो भन्न सकेनन् । कार्यक्रममा सहभागी धेरैले आफु पीडित भएको भनेर दाबी गर्न सकेनन् । प्रतिकात्मक रुपमा “फलानो र ढिस्कानो” भनेर अरुतिर औंला तेर्साए ।
र अन्तमा, “ईन्स्योरेन्स” आफैमा आवश्यक छ र यो चाहिन्छ । म स्वयम् पनि कुनै एक विमा कम्पनीको ग्राहक हुँ । म मात्रै होइन, राम प्रसाद खनाल, शैलेश श्रेष्ठ वा कोहि “ईन्स्योरेन्स” को अगेनेष्टमा होइनौं “ ईन्सेक्युर ईन्स्योरेन्स” बाट बचौं भन्ने मात्र आशय हो ।
र यत्ति भन्न चाहे, “ईन्स्योरेन्स आतंक” नभएर “ईन्स्योरेन्स आवश्यकता” भनेर जनजनलाई भन्न सकौं । जहाँ सुरक्षित भविष्यको निम्ति ढुक्क होऔं ।
विहिवार, २०७२ चैत्र ०४ गते २०:४७ / Thursday, Mar 17, 2016 8:47 pm